Uyu Train Bridges chinhu incredible mapurani vanonetseka. Unogona kuona nhanhatu reraimu Maberere nekuzorora kumusoro mbiru shanu. Bhiriji kunotungamirira zvakananga 216 mita refu Landwasser tanera.
Ichi zvikuru wokuScotland aikosha ayambuka rwizi Anobuda pa Queensferry, chete kumavirira Edinburgh.
Sezvo zviri chete 409 mamita refu, kunewo chimwe chikamu zambuko munofamba nevanhu uye cyclists. Pane chimwe nechimwe kurutivi chitima Makwara. Vanhu Matotanga uchingoti 'rudo padlocks' pamusoro fenzi pakati njanji uye chime nharaunda kubva 2008.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/breathtaking-train-bridges-europe/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)